The Now စကားလုံး - - Mark Mallett နှင့်အတူ
ဂီတ & ပွဲများ
WEBCAST & ဗီဒီယို
ယေဘုယျ filter များ
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 30, 2021 နိုဝင်ဘာလ 30, 2021 by အမှတ်
ဘုရားသခ တစ်ချိန်က အာဒံ၏မွေးရာပါအခွင့်အရေးဖြစ်သော်လည်း မူလအပြစ်အားဖြင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သော “မြင့်မြတ်သောအလိုတော်၌ အသက်ရှင်ခြင်းဆုကျေးဇူး” ကို ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အတွက် သိမ်းဆည်းထားသည်။ သန့်ရှင်း၍ အပြစ်အနာအဆာကင်းသော သတို့သမီးဖြစ်စေရန်၊ ဘုရားသခင်သည် ခမည်းတော်၏ စိတ်နှလုံးသို့ ပြန်လာရသော ခရီးရှည်ကြီး၏ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် ဘုရားသခင် ပြန်လည်ထူထောင်လာခြင်းဖြစ်သည် (ဧ ၅။ :၂၇)။စာဖတ်ခြင်း Continue →
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 23, 2021 နိုဝင်ဘာလ 24, 2021 by အမှတ်
ဒီနည်းကို ဆုတောင်းပြီးနောက် မနက်ခင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တရားထိုင်နည်းကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ငရဲလွှတ်လိုက်တယ်. ပရောဖက်ပြုချက်နဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားစရာတွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်က အခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ဒီနေ့ပဲ ပြန်ပို့ဖို့ စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားတွေ ဘယ်လောက်မှန်သွားပြီလဲ။
သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် အဓိကအချက်အချို့ကို အကျဉ်းချုံးပြီး ယနေ့ဆုတောင်းနေစဉ် ကျွန်ုပ်ထံရောက်လာသော “ယခုစကားလုံး” အသစ်ဆီသို့ ဆက်သွားပါမည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue →
WAM - စစ်မှန်သော စူပါပြန့်နှံ့သူများ
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 19, 2021 နိုဝင်ဘာလ 19, 2021 by အမှတ်
THE ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်ငြင်းဆိုသူများကိုအစိုးရများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှအပြစ်ပေးသည့်အနေဖြင့် "ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေး" ကိုခွဲခြားခြင်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အချို့သော ဘိရှော့များသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များကို တားမြစ်ခြင်းနှင့် သစ္စာစောင့်သိသူများကို ပွဲတော်များကျင်းပခြင်းမှ တားမြစ်ခြင်းများကိုပင် စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် သိသာထင်ရှားတဲ့ အတိုင်းပဲ တကယ့် စူပါပြန့်နှံ့သူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး…
စာဖတ်ခြင်း Continue →
WAM - သဘာဝ ကိုယ်ခံစွမ်းအားက ဘာလဲ။
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 14, 2021 နိုဝင်ဘာလ 15, 2021 by အမှတ်
ပြီးနောက် သုံးနှစ်ကြာ ဆုတောင်းပြီး စောင့်မျှော်ရင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် “အမည်ရှိ ဝဘ်ကာတ်စီးရီးအသစ်ကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ခဏစောင့်ပါဦး” တစ်နေ့တွင် ထူးထူးခြားခြား အလိမ်အညာများ၊ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုများနှင့် ဝါဒဖြန့်မှုများကို "သတင်း" အဖြစ် ကွယ်ပျောက်သွားသည်ကို ကြည့်ရင်း အတွေးဝင်လာသည်။ မကြာခဏပြောလေ့ရှိတယ်"ခဏစောင့်ပါဦး… အဲဒါ မမှန်ဘူး။”စာဖတ်ခြင်း Continue →
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 10, 2021 နိုဝင်ဘာလ 17, 2021 by အမှတ်
ရှင်ဘုရင်တို့၊ နားထောင်၍ နားလည်ကြလော့။
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ တရားသူကြီးများ သင်ယူပါ။
လူများတို့ကို အုပ်စိုးသောမင်း၊ နားထောင်ကြလော့။
အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် သင့်အား အခွင့်အာဏာကို ပေးတော်မူ၏။
အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားအားဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာ၊
အဘယ်သူသည် သင်၏အကျင့်ကို စစ်ကြော၍၊
အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် သူ၏နိုင်ငံတော်၏ အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သော်ငြား၊
ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း မကျင့်၊
ကြောက်မက်ဘွယ်နှင့် လျင်မြန်စွာ သင်တို့ရှိရာသို့ လာလိမ့်မည်။
ချီးမြှောက်ခြင်း သည် ပြင်းထန်သောကြောင့်၊
နှိမ့်ချသောသူတို့အား ကရုဏာဖြင့် လွှတ်ခြင်းငှါ...
(ဒီနေ့ရဲ့ ပထမ ဦး ဆုံးစာဖတ်ခြင်း)
IN နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် အနီးတွင် ကျရောက်သည့် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ သို့မဟုတ် စစ်ပြန်များနေ့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအများအပြားတွင် လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော သန်းနှင့်ချီသော စစ်သည်များ၏ အသက်ကို ပေးလှူခဲ့သော စစ်သည်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို သူတို့ရှေ့မှာ အငွေ့ပျံနေတာကို စောင့်ကြည့်နေသူတွေအတွက် အခမ်းအနားတွေက အပေါက်ကျယ်ပါတယ်။စာဖတ်ခြင်း Continue →
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 9, 2021 နိုဝင်ဘာလ 9, 2021 by အမှတ်
သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့လော့။
ဣသ ရေလအမျိုး၊ နားထောင်၍၊
သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ ကတိတော်နှင့်အညီ၊
နို့နှင့် ပျားရည်စီးသောပြည်ကို ပေး၍၊
(ပထမ ဦး ဆုံးစာဖတ်ခြင်းအောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
သင့်အကြိုက်ဆုံး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကောင်း တွေ့ဆုံရန် ဖိတ်ကြားခံရပါက စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သင်သည် ချစ်စရာကောင်းသော ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ကာ သင့်ဆံပင်ကို မှန်ကန်စွာ ပြုပြင်ပြီး သင်၏ ယဉ်ကျေးသော အမူအကျင့်ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ၀တ်ဆင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။စာဖတ်ခြင်း Continue →
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 6, 2021 နိုဝင်ဘာလ 8, 2021 by အမှတ်
…အသင်းတော်၏ တစ်ခုတည်းသော ခွဲခြား၍မရသော ဓမ္မာစရိယဖြစ်သောကြောင့်၊
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ၊
သယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လက္ခဏာမပြသော တာဝန်ကြီးသည်။
သို့မဟုတ် မရှင်းလင်းသော သွန်သင်ချက်သည် ၎င်းတို့ထံမှ လာကြောင်း၊
မှားယွင်းသော လုံခြုံမှု၏ အာရုံထဲသို့။
-Cardinal Gerhard Müller၊
ယုံကြည်ခြင်းအယူဝါဒအတွက် အသင်းတော်၏ စီရင်စုဟောင်း
ပထမဦးစွာအရာ, ဧပြီလ 20th, 2018
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် (သို့) ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် (ဆန့်ကျင်ဘက်) ဖြစ်ခြင်း၏ မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာ ကက်သလစ်ဘာသာကို ခုခံကာကွယ်တဲ့ မေးခွန်း၊
ဆိုလိုသည်မှာ ပေတရုရုံးကို ကာကွယ်ခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။
—Cardinal Raymond Burke ကက်သလစ်ကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာ,
ဇန်နဝါရီလ 22, 2018
မီ သူကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါးခန့်က ကပ်ရောဂါစတင်သည့်နေ့အထိ၊ တရားဟောဆရာကြီး Rev. John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) မှ ကျွန်ုပ်အား အားပေးစာတစ်စောင် ရေးခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်၏ စာဖတ်သူများ အားလုံးအတွက် အရေးတကြီး ပေးစာတစ်စောင် ပါရှိသည်။စာဖတ်ခြင်း Continue →
ဝတ္ထုအသစ် ထုတ်ဝေမှု။ အသွေး
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 2, 2021 နိုဝင်ဘာလ 2, 2021 by အမှတ်
ကတည်းက ငါ့သမီး Denise ၏ပထမဆုံးဝတ္ထုကိုထုတ်ဝေသည်။ သစ်ပင် လွန်ခဲ့သော ခုနစ်နှစ်ခန့်က — ရူးသွပ်သောသုံးသပ်ချက်များနှင့် ရုပ်ရှင်တစ်ကားအဖြစ်ဖန်တီးရန် အချို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကို စုဆောင်းထားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်— ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆက်တွဲကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီမှာ...စာဖတ်ခြင်း Continue →
မလာတော့ဘူး - ဒီမှာ
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 28, 2021 အောက်တိုဘာလ 31, 2021 by အမှတ်
မနေ့ကနှာခေါင်းကို မဖုံးထားဘဲ ပုလင်းလှောင်ရုံထဲကို ၀င်သွားတယ်။Mask များသည် အလုပ်မလုပ်ရုံသာမက COVID ကူးစက်မှုအသစ်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်းနှင့် Mask များသည် ကူးစက်နိုင်ခြေကို မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကူးစက်နိုင်သည်ကို ဖတ်ရန် များပြားလှသော ဒေတာများက ဖော်ပြသည်- အဖြစ်မှန်ကို unmasking စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အချက်ကတော့ စစ်သွေးကြွအမျိုးသမီးတွေ… ကျွန်မကို ဇီဝအန္တရာယ်တစ်ခုလို ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ ... သူတို့က စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်ပြီး အပြင်မှာရပ်ပြီး စောင့်ခိုင်းပေမဲ့ ရဲကိုခေါ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
Mask များသည် အလုပ်မလုပ်ရုံသာမက COVID ကူးစက်မှုအသစ်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်းနှင့် Mask များသည် ကူးစက်နိုင်ခြေကို မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကူးစက်နိုင်သည်ကို ဖတ်ရန် များပြားလှသော ဒေတာများက ဖော်ပြသည်- အဖြစ်မှန်ကို unmasking
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 27, 2021 နိုဝင်ဘာလ 30, 2021 by အမှတ်
အဲဒါကို ဘာနဲ့ ယှဉ်နိုင်မလဲ။
ကြီးပြင်းလာသောအခါ ကြီးမားသော ချုံပုတ်ဖြစ်လာသည်။
မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် အကိုင်းအခက်၌ ကျိန်းဝပ်ကြ၏။
တိုင်း နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသည်– “နိုင်ငံတော်သည် ကြွလာ၍၊ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြည့်စုံပါစေ” ဟူသောစကားများကို ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမည်ကို မမျှော်လင့်ထားပါက ထိုသို့ဆုတောင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှုသွန်သင်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရား၏ သာသနာတော်တွင် ပထမဆုံး နှုတ်ကပတ်တော် မှာ-စာဖတ်ခြင်း Continue →
123456... 169 နောက်တစ်ခု»
မူလစာမ်က္ႏွာ (Home) (1,648)
PAGANISM အသစ် (10)
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2021) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2021 (3) ဇွန် 2021 (2) မေလ 2021 (6) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2020 (9) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2020) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2020 (11) ဇွန် 2020 (13) မေလ 2020 (9) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2019 (7) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2019) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2019 (4) ဇွန် 2019 (6) မေလ 2019 (9) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (3) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2018) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2018 (3) ဇွန် 2018 (6) မေလ 2018 (13) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (10) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2017) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2017 (9) ဇွန် 2017 (9) မေလ 2017 (10) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (14) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2016) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2016 (6) ဇွန် 2016 (9) မေလ 2016 (10) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (7) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2015) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2015 (8) ဇွန် 2015 (8) မေလ 2015 (9) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (10) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2014) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2014 (6) ဇွန် 2014 (5) မေလ 2014 (19) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (24) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2013) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2013 (4) ဇွန် 2013 (1) မေလ 2013 (6) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (2) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2012) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2012 (3) ဇွန် 2012 (5) မေလ 2012 (2) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (8) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2011) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2011 (4) ဇွန် 2011 (9) မေလ 2011 (4) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (7) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2010) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2010 (5) ဇွန် 2010 (7) မေလ 2010 (9) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (8) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2009) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2009 (7) ဇွန် 2009 (7) မေလ 2009 (5) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2008 (10) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2008) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန် 2008 (5) မေလ 2008 (7) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (12) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2007) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2007 (5) ဇွန် 2007 (5) မေလ 2007 (6) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (9) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2006) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2006 (16) ဇွန် 2006 (21) မေလ 2006 (17) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2005 (10) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ဇွန် 2005 (1) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄)
ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း© 2021 နေပြည်တော်
A နေပြည်တော် အကွောငျး